घर » यात्रा सुरक्षा र आपतकालिनहरू » पुन: प्राप्ति पोस्ट सी १ on कोरोनाभाइसको लागि व्यावहारिक गाइड
रिकभरी पोष्ट C-19 लाई एक व्यावहारिक गाइड
जस्तै यात्रा र पर्यटन उद्योग संघर्ष चलिरहेको संग C-19 संकट, होटेलहरू र पर्यटन व्यवसायहरू बन्द हुँदा र टोलीहरू बिछ्याइएका कारण उद्योग खस्कँदै गइरहेको छ। व्यवसाय मालिकहरू निर्देशनका लागि खोज्दै छन् र पुन: प्राप्तिका लागि मार्गनिर्देशन चाहिन्छ।
तिनीहरू दिशातर्फ चिच्याइरहेका छन्। उद्योगलाई तत्काल बढी केन्द्रित हुनु आवश्यक छ र व्यावसायिक रूपमा कुराकानी गर्नु पर्छ जुन यात्रा र पर्यटन उद्योगले पुन: प्राप्ति हुन थाल्दा के गर्न सक्दछ।
तिनीहरू नेतृत्वको लागि भोकाएका छन् र केही केसहरूमा कि उनीहरूको परिवारमा भोकमरी विद्यमान छ किनकि यात्रा र पर्यटनका कर्मचारीहरू बिदा छन्।
विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) ले तत्काल सरकार समर्थनको लागि आह्वान गर्दै केही नेतृत्व प्रदान गरेको छ। यी सिफारिसहरू पहिलो चरणमा ग्लोबल टुरिज्म क्राइसिस कमिटीबाट आएको हो जुन युएनडब्ल्यूटीओले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरू सहित स्थापना गरेको हो।
तिनीहरूको सिफारिशहरू सबैलाई आह्वान गर्दछ कि रिकभरीको लागि तयार हुनको लागि अझ बलियो र दिगो फिर्ता आउन।
कार्यका लागि सिफारिशहरू कार्यहरूको पहिलो व्यापक सरकार हो र निजी क्षेत्रले अब र चुनौतीपूर्ण महिनाहरूमा लिन सक्दछ।
सबैभन्दा प्रभावकारी हुनको लागि हाम्रो प्रतिक्रिया "... द्रुत, लगातार, एकताबद्ध र महत्वाकांक्षी हुनु आवश्यक छ," उनीहरूले भने।
तर सबै कसरी पुन: प्राप्तिको लागि योजना गर्छन्?
पुरानो भनाइ जाँदा यो कहिले तयार हुँदैन। आकस्मिक योजनाहरू एक राम्रो विचार हो। व्यापार तनावको बिभिन्न डिग्रीहरूमा एक नजर लिनुहोस्। सोध्नुहोस् "के हो भने…।" प्रश्नहरू सबैभन्दा नराम्रो केस परिदृश्यहरूमा सुरू गरेर फेरि काम गर्नुहोस्।
जब योजना विकसित हुन्छ, दीर्घकालीनमा फोकस गर्नुहोस् र ग्राहकको सन्तुष्टि, कर्मचारी सन्तुष्टि, र ब्रान्डको दीर्घकालीन छविमा पार्ने प्रभावलाई विचार गर्नुहोस्। लामो अवधिको दृष्टि हराउनु, ग्राहक र कर्मचारीको सन्तुष्टिमा सम्झौता गर्ने र मुनाफा र व्यवहारिकतामा हानी पुग्न सक्छ।
शान्त र केन्द्रित रहनुहोस्। समाधान खोज्नुहोस्। पछिल्ला राम्रो अवधिहरूसँग डाउनटर्न पिरियडहरू तुलना नगर्नुहोस्। दीर्घकालीन निर्णयहरूको सन्दर्भमा अधिक सोच्नुहोस्।
छुट छुट दिन सजिलो छ तर उत्तर नहुन सक्छ।
प्याकेजहरु मा लाभ बन्डलिंग प्रयास गर्नुहोस्। छूटको सट्टा मान थप गर्नुहोस्। बारम्बार, व्यवसायहरूले बुझेका छन कि कसरी आर्थिक वर्षमा लाग्ने छुटबाट छुट पाउन वर्षौं लाग्छ।
यदि छुट प्रस्ताव गरिएको हुनुपर्दछ, एक बुद्धिमान तरिका मा त्यसो, व्यापार को लागी धेरै खर्च बिना। ग्राहकहरु के चाहान्छन् भनेर सोच्नुहोस्। साथै, प्याकेजहरूमा ध्यान दिनुहोस् जुन अनौंठो हो - होटलहरूमा उदाहरणका लागि कोहीले नि: शुल्क अतिरिक्त रातको प्रस्ताव गर्न सक्दछन्, त्यसैले विशेष प्याकेजहरू विकास गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
मार्केटिंग बजेटहरू मर्मत गर्नुहोस्
हालको ग्राहकहरु राख्नुहोस् र प्याकेज र पदोन्नतिहरु विकास गर्नुहोस् जुन दुबै वर्तमान र नयाँ सम्भावित व्यवसाय लाई आकर्षित गर्दछ। यो त मात्र सम्भव छ यदि मार्केटिंग बजेट कायम राखियो। क्षितिज पछाडि हेर्नुहोस्। साना, कम मूल्य-संवेदनशील बजार क्षेत्रहरू अन्वेषण गर्नुहोस् र खाद्यान्न र पेय पदार्थहरूको लागि नयाँ राजस्व स्ट्रिमहरू विकास गर्नुहोस्, टाढा टाढा मेनूहरू, बेकरीहरू, इन्टरनेट क्याफेहरू। अधिक विविधिकरणको लागि स्वास्थ्य क्लबहरू र स्पा हेर्नुहोस्।
सबै राजस्व स्ट्रिमहरूबाट राजस्व रूपान्तरण कसरी अनुकूलन गर्ने भन्ने बारे टोलीहरूसँग जोड सुनिश्चित गर्नुहोस्, यो ठूलो होस् वा सानो, जुन अन्ततः तल्लो रेखाहरूलाई सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
सेवा स्तरहरू कायम राख्नुहोस्
यदि लागत काट्नु पर्छ भने, व्यवसायको क्षेत्रहरूमा त्यसो गर्नुहोस् जुन ग्राहकलाई सीधा असर गर्दैन। यदि ग्राहकको सन्तुष्टि र सेवाको गुणस्तरमा नकारात्मक असर परेको छ भने दुबै वर्तमान ग्राहकहरुलाई कायम गर्न र C-19 समाप्त भए पछि नयाँ ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्न गाह्रो हुन्छ।
बुद्धिमत्ता भेला गर्नुहोस्। स of्कटको प्रस De्ग निर्धारण गर्नुहोस्
सबै जानकारी जम्मा गर्न र के हुँदै छ वास्तवमै के हुँदैछ भनेर हेर्नको लागि एक क्षण लिनुहोस्। स्थितिको आकलनले कार्यको मार्ग निर्धारण गर्दछ, त्यसैले सावधानीका साथ अगाडि बढ्नुहोस्।
सबै सरोकारवालाहरुसँग कुरा गर्नुहोस्; तिनीहरूको विशेषज्ञता र विचारहरू खोज्नुहोस्; उनीहरूलाई थाहा दिनुहोस् समस्या गम्भीरताका साथ लिइएको छ। यो त्यस्तो समय हो जब नेताहरू प्रमाणित हुन्छन्। एक नेता बन्नुहोस्
राम्रो नेताहरूले स्पष्ट र अक्सर कुराकानी गर्छन्
स crisis्कटमा, सूचनाको शून्यतालाई प्राय: नकारात्मक मानिन्छ। यो आशा छैन कि सी १ crisis को संकट केवल अदृश्य हुनेछ। यो पहिले नै थाहा छ यसको प्रभाव लामो र गहिरो हुनेछ। प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् र जानकारी प्रदान गर्नुहोस्। भविष्यका योजनाहरू र रणनीतिलाई विश्वासपूर्वक र स्पष्ट रूपमा संवाद गर्नुहोस् - बारम्बार र लगातार डेलिभर गरिएको सन्देश प्राप्त हुनेछ तर निर्णायक कार्यद्वारा यसलाई ब्याक अप गरिएको छ भनि सुनिश्चित गर्नुहोस्। फेरि, यो समय नेतृत्वको हो। स्थिति बुझेर, टीमहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै, र स्पष्ट रणनीति सक्रिय गरेर, मुटुको दुखाइ, नकारात्मक धारणा, र तल्लो रेखामा हिट कम गर्न सकिन्छ।
भविष्यमा विचार गर्नका लागि धेरै व्यवसायिक टाइमलाइनहरू छन्, तत्काल (अब) र भविष्यमा ती।
यस सी १ era युगमा सबै व्यवसाय र मार्केटिंग योजनाहरू शून्य छन् र मिति समाप्त भएको छ। उद्योग मालिकहरूले चाँडै स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उद्योगको पाels्गाहरू फेर्न थाल्नु भन्दा बढी के चाहिन्छ?
धेरै प्रश्नहरू सोध्नुहोस् ...
व्यापारमा थप debtण र क्षतिलाई जोगाउन के गर्ने?
व्यापार मालिकहरूको लागि कस्तो वित्तीय मद्दत छ र सहयोगको लागि कसरी आवेदन दिने?
कर्मचारीहरु र पूर्व कर्मचारीहरु लाई के सहयोग छ? उदाहरणका लागि सरकारी कोषहरू, उदाहरणका लागि, थाइल्याण्डमा कसरी सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) को लागि आवेदन दिन टिमहरूलाई मद्दत गर्ने?
ब्यापार हेर्नका लागि कहाँ जानुहुन्छ?
पुन: प्राप्तिको तयारीका लागि उद्योग-व्याक्तिगत पहलमा भाग लिनुहोस् - पहल जसलाई दुबै कार्य र अझै बढी नेतृत्व चाहिन्छ। यदि यात्रा समस्या हो भने, भिडियो कन्फरेन्सिंग, वेबिनारहरू, र अन्य सामाजिक दूरीहरू "मैत्री" विकल्पहरूको विचार गर्नुहोस्।
यात्रा एक भर्चुअल स्थिर मा छ। तर यो फर्कनेछ।